Nilamindamina ny fety : nanjaka ny fisavana sy ny fisamborana nataon’ny polisy | NewsMada
Nilamindamina ny fety : nanjaka ny fisavana sy ny fisamborana nataon’ny polisy
Tazana nanerana ny tanana ny 4×4 an’ny polisy sy ny Emmo/Reg. Rakotra mpitandro filaminana ny tanàna niaro ny vahoaka sy ny fananany. Nandeha ny fisavana fiara, mpandeha an-tongotra. Tao ihany koa ny fisamborana…
Tsy nisehoana asan-jiolahy mahery vaika teto an-dRenivohitra nandritra ny fety. Nisy ihany ny fikasana hanendaka, toy ny teny Andohatapenaka ny alin’ny 31 desambra teo, fa tsy tanteraka. Voalaza fa efa-dahy nanakana fiara, saingy tsy nijanona io ka nitsoaka ireo olon-dratsy.
Nameno tanàna ny polisy nandritra ny alin’ny 31 desambra sy ny 1 janoary 2016. Nanjaka ny fisavana fiara, ny fisavana ireo mpandeha an-tongotra, indrindra tamin’ny toerana somary mafampana sy mangingina. Nivezivezy ny fiara 4×4 an’ny polisy mbola nahitana ny an’ny Emmo/Reg ihany koa.
Tazana teny amin’ireo toerana fanaovana fety sy fiangonana ihany koa ny mpitandro filaminana. Maro ny adiady nitranga vokatry ny hamamoan’ireo andiana tovolahy ka niditra an-tsehatra ny polisy. Tsy nisalasala fa nisambotra avy hatrany ny polisy toy ny nitranga teny Antanimena, nandritra ny fety iray teny an-toerana. “Tsy maintsy mandray andraikitra ny polisy rehefa misy ny fanakorontanana. Eo ihany koa ny fisavana karatra”, hoy ny fanazavana.
Amin’ny ankapobeny, voafehy aloha ny asan-jiolahy raha ny teto Antananarivo Renivohitra ny roa andron’ny fety teo. Raha miasa mafy tahaka ny fety ny mpitandro filaminana, mety tsy hisy ny asan-jiolahy, na hihena farafaharatsiny. Anisan’ny ahiahin’ny olona ny hiverenan’ny asan-jiolahy raha vao mihalefy eo ny asan’ny mpitandro filaminana. “Manararaotra tahaka ny banga mihomehy alina mantsy ny jiolahy raha vao tsy manamafy ny asany ny polisy na ny zandary. Tokony hotohizana hatrany ny fanaovana fisafoana na andro na alina, fa tsy amin’ny andro fety ihany”, hoy ny olon-tsotra.